#उ बेलाको कुरो
कतारी रियाल २७ वैशाखपछि सटही नहुने
'घरेलु क्रिकेटमा बहुदिवसीय प्रतियोगिता नखेलाई टेस्टसम्म पुगिँदैन'
लन्डन बियर प्रतियोगितामा अर्नालाई दुई पदक
एनआरएन नेपाल विकास काेषको स्थापना
आजबाट कोरोना खोपको दोस्रो डोज लगाइँदै (तालिकासहित)
एक महीना सर्‍यो राप्रपाको महाधिवेशन
भारतमा २० लाख पुगे सक्रिय संक्रमित
कति सुरक्षित छ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कुर्सी?
एमसीसीमा अहिलेको अलमल, भविष्यको विद्युत् प्रणालीलाई गहिरो असर
म आमाको लागि छोराजस्तै छोरी
ब्लग रूपा जोशी
मेरी बुढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा मुवाले अड्की अड्की पुराना कुरा गर्नुहुन्छ । यसपालिको अंशमा मुख्यतः मुवाको आमा अनि दिदीबैनीबारे सुनाउनुभएको छ, वहाँकै शब्दमाः
भूत आउँथ्यो, धुमधाम तर्साउँथ्यो
मेरी बुढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा अड्की अड्की पुराना कुरा गर्नुहुन्छ। यसपालिको अंश मुवाको माइती, ढोकाटोलको घर, चोक र ‘आवासीय’ भूतहरूबारे, वहाँकै शब्दमाः
हे भगवान, बल्लामलाई यस्तो गज्जबको बनाउँछु ! मेरी बुढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा मुवाले अड्की अड्की पुराना कुरा गर्नुहुन्छ। यसपालिको अंश मुवाको एक्लो छोरा ‘बल्लाम’ (स्व. डा. बलराम जोशी) को मुख्यत: बालापनमा केन्द्रित छ, वहाँकै शब्दमाः
चन्द्रशमशेरकी कान्छी रानी काशी गइन् मेरी बुढीसासू (सासूको सासू) चन्द्रकुमारी जोशीको उमेरले १०६ टेकिसकेको छ। विस्मृतिले च्याप्दै गए पनि, हामीले कोट्याउँदा अड्की–अड्की पुराना कुरा गर्नुहुन्छ। यसपालिको अंश मुवाको काशी बसाइ र घटनाहरूमा केन्द्रित छ, वहाँकै शब्दमाः